माछा माछा भ्यागुतो भो झलनाथलाई « नेपाली मुटु
« तानातान, हानाहान, किनबेच : उफ् राजनिती
‘राजनितीमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुदैन’ »
हिजो राजनितीक वृतमा एमाले अध्यक्ष एक्कासी हावी भए । प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी गर्दै उम्मेदवारी दिदा सम्म उनको सम्भावनालाई न्यून नै मानिएको थियो । तर एकाबिहानै माओवादीले खनाललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे पछि भने उनको सम्भावना अकाशियो । भटाभट एमाले अध्यक्षलाई समर्थनका पत्रहरु प्राप्त हुन थाले । संसद बैठक हुने समयसम्म उनलाई ३९१ मत प्राप्त भइसकेको थियो । बाँकी १० मत नै उनको लागि दुर्भाग्यपुर्ण रह्यो । यसैले स्पष्ट बहुमत हुदाहुदै पनि दिल्लीका प्रभु र उनका चरणदास ओली र नेपालको चुक्लीले उनी नेपालको ३४ औ प्रधानमन्त्री हुने दौडबाट बाहिर निकालिए । जसोतसो उनले उम्मेदवारी त दिए, तर माओवादीका छनौटका नेता भएकै कारण दिल्ली र सिल्लीका नजरमा उनी नालायक भए अनि लोकतन्त्रका ढर्रा पिट्ने कमनिष्टहरुबाटै रेडकार्ड देखाइए । शुक्रबार हुने फाइनलमा अब खनाल हुने छैनन् ।
यसरी हातमा परिसकेको माछा फुत्किएर भ्यागुतो समाउँनुको मुख्य कारण मधेसवादी दलहरु देखिए । उपेन्द्र यादवको फोरम, गच्छेदारको फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा र राजेन्द्र महतोको सदभावना गरि चार मधेसवादी दल भएको यो मोर्चासँग ८२ सांसद छन् । केहि क्षण अगाडीसम्म खनाललाई आफ्नो समर्थन रहने भन्ने जनाएका फोरमका यादब दिल्लीका प्रभुको आज्ञा बमोजिम तटस्थ बसिदिने निर्णय गरिदिए । अन्तत ः झलनाथ खनालले ४०१ पु¥याउँन सकेनन् । अरु दुइ उम्मेदवार प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेलले बहुमत पु¥याउँन सकेनन् । अब अर्को चुनाव शुक्रबार प्रचण्ड र रामचन्द्र बिचमा हुनेछ ।
दिल्लीका प्रभु कुनै पनि हालतमा प्रचण्डको सरकार हुनुहुदैन भन्नेमा छन् । यसैले उनीहरुको प्रथम र अन्तिम बिकल्प नै पौडेल हुनेछन् । यसैले प्रभुको यो किल्ला तोड्न माओवादीलाई निकै गा¥हो हुनेछ । एमाले सरकारलाई आफुले अन्त्य सम्म नै साथ दिएकाले आफुलाई मत दिन कांग्रेसले एमालेलाई पुकारिरहेको छ । प्रभुको आज्ञा विपरित एमाले अहिले भने जस्तै तटस्थ रह्यो भने कांग्रेसको कुनै पनि हालतमा बहुमत पुग्दैन । यहि अबश्थामा मधेसवादी दलहरुले माओवादीलाई समर्थन गरे माओवादीको बहुमत पुग्नेछ । तर प्रभुको मुड र एमालेको ढुलमुलको मुल्याकंन गर्ने हो भने भोलीको चुनाव पनि अनिर्णित हुने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ ।
This entry was posted on July 22, 2010 at 11:33 am	and is filed under समाचार/सन्दर्भ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.